Mid ka mid ah isbedelada weyn ee waxaannu aragnay ayaannu ka kacaanka ee technology mobile waa korodhka weyn ee tirada videos diiwaan labadaba oo wuxuu wada baabbi'iyey, iyadoo la adeegsanayo farsamada la duubay intii hore ka sii casri ah oo ay la socdaan suuq kacsi u arkaysid iyaga iyada oo dhufto ee warbaahinta bulshada ee kala duwan, video waa halkan ma aha oo kaliya in uu sii joogo, ay qaadato in ka badan. Iyada oo dhammaan video this, waxaa socota in dadku doonayaan siyaabood oo wax kooda taagan, iyo la Instagram iyo wixii la mid ah samaynta fiirin Retro u images aad u badan oo fashion, waxaa la yaab ma laha in la arko safarka arrimuhu oo idil, si madal video iyo sidoo , iyada oo cayn kasta oo Chine in la siiyo Retro ah, 8mm fiirin camera cine in clips aad, halkan waxaan ku yeelan doontaa eegno ugu wanaagsan ee labada macruufka iyo Android.
1. guridda 8mm Video Camera (Waayo, Android)
App koowaad ee Android waa app weyn in aad jirsado camera qalab mobile ayaa gasho camera cine 8mm. Ama ugu yaraan in ay tahay waxa qof walba oo arka aad videos qabaa doonaa!
App waxaa ka mid ah 5 toban sano presets Kiinteistö oo aan kaliya ku siin in fiirin dugsiga jir fiican marka duubay, ay u shaqayso in waqtiga dhabta ah, iyo muujinaysaa Falanqeynta ka mid ah waxa ay video ka eegi doonaa sida aad u qoro. Sidoo kale presets kuwa, aad qabsato karaa saamaynta gudahood app in la abuuro looks cusub oo hufan waxa aad rabto in aad u dhigma. Intaa waxaa dheer saamaynta isku gal weli images aad qaadato iyo sidoo app soo qori doonaa. Ma weydiisan kartaa in ka run ahaantii.
An ku ool ah, si sahlan loo isticmaali app in uu wax kasta oo aad ka fili lahayd.
2. iSupr8 guridda Video Camera (Waayo, Android)
Waxaana suura gal kale oo wanaagsan oo ku soo fiirin 8mm, taas oo mid ka mid ah ku dari kartaa saamaynta in videos aad gudahood app soo tooganayaan iyo waxa kale oo aad dajiyaan karaa hore toogteen video iyo dar u fiiriyaan Retro kuwa aad, oo waxa uu xitaa ka shaqeeyaa footage xal 1080p. Horena The 8mm yimaado sida caadiga ah ay la socoto ciidan ee user saamaynta hagaajin karo sida xagashada film iyo vignette nooca-socodka, si kastaba ha ahaatee, presets dheeraad ah waa in app iibsadaan, sidaas darteed waxaa haboon in la xasuusnaado in ka hor inta ku rakibidda.
Mid ka mid ah waxa uu sidoo kale codsan kartaa sida diirada ay ku aamusiiyaa sidoo, iyo saameynta ay dhab ahaan waa mid aad u qancin, app isticmaalo kala astaynta jagooyinka midabka halkii filtarrada in la siiyo waxaana suura gal ah saxda ah ee super 8-dhexaad ah.
Easy in ay isticmaalaan, saameynta aad u fiican, laakiin presets dheeraad ah kharash dheeraad ah.
3. VivaVideo: Free Video Editor (Waayo, Android)
Vivavideo bixisaa editor si buuxda u xoogan, oo ay ka mid awood u leh inay kala qaybsan tahay oo ay ku biiraan clips,-waqtiga dhabta ah saamaynta camera filimo toogtay gudaha gacanta ku camera-ada, oo awood u leh inay kuwii isku filtarrada on video aad soo dhoofsadaan galay app.
Waxa intaa dheer in saamaynta 8mm waxaa jira daraasiin ka badan si ay u tijaabiyaan leh iyo sidoo kale, sidaa darteed haddii aadan rabin biqil kasta si ay u eegaan sida filim oo canabka, uma baahnid inaad app cusub.
Full app featured bixiya saamaynta badan, 8mm ma aha sida qancin sida qaar ka mid ah halkan, laakiin waxaa jira doorasho ka badan kooxaha kale.
4. S_Video Editor (Waayo, Android)
Kanu waa wax yar oo kala duwan, ee in ay tahay editor ah, oo kaliya ay u shaqayso on video aad soo dhoofsadaan u galay oo uu leeyahay jirin hab lagu diiwaangeliyo isticmaalaya camera qalabka oo dhan. Waxaa ka mid ah waxyeelada dersin, waji iyo filtarrada, oo ay ku jiraan saamayn aad u fiican 8mm ah in aad isku dari kartaa dadka kale si aad u hesho qaar ka mid ah looks run ahaantii aad u fiican si aad u videos. Waxay qaban karaan oo dhan qaraarada ilaa 1080p, laakiin waxaa xusid mudan in kuwii qaraarkii aad u baahan tahay multicore processor Soomi in ay ka shaqeeyaan xawaare macquul ah.
5. Retrica (Waayo, Android)
Mid kale ha qaato on saamaynta 8mm, Kanu waa kaliya ee weli sawirada. Si kastaba ha ahaatee, halka in aan cidhiidhi cad, waxaa jira upsides badan oo ay ku buuxin. Waxa si fudud yahay saamayn ugu fiican ee aad ka heli kartaa qaab fiirin 8mm. Qaadashada definta leh, kuwaas oo sida diirada ku abuuraa images yaab leh characterful in ay ahayd in la kor u toos ah uga 1960 ee guriga movie.
Sidoo kale in fiirin guridda, waxaa jira 50 presets dheeraad ah oo aad siin doorashada weyn in ay ka shaqeeyaan ka.
Haa, waa kaliya ee weli images, laakiin waa Yaabe Illeen si aad u wanaagsan u sameeya.
6. 8mm (Waayo iPhone)
Waxa suurto gal ah waxaana suura gal ugu fiican ee u fiiriyaan 8mm in app kasta oo meel kasta, 8mm waa app fantastik ah, fududahay in la isticmaalo, wax badan oo la doortay, oo xitaa ay dhigaan sheegan in ay isticmaalaan ah Oscar guuleystay film kii sameeyey. Interface ayaa, inta badan la dayacay ee ka mid ah noocyada kala duwan ee Chine, xanbaarsan yahay istuuray ah camera Retro iyo muuqataa fantastic ku daray heer oo dhan ku qanacsan tahay in howlgalka. Raadka waxaa laga dalbadaa in waqtiga dhabta ah si aad u aragto waxa aad helayso. Waxa intaa dheer in saamaynta 8mm waxaad isticmaali kartaa dhowr looks kale guridda aad footage si kala duwan yihiin aad wax soo saarka iyo in badan oo ka mid ah doorashada hal abuur.
App ku dhowaad taago, An in ay soo saartaa natiijada cajiib ah.
7. Vintagio (Waayo iPhone)
A app yar fiican oo fuliya kala duwan ee saamaynta ku Intaa waxaa dheer in mid ka mid ah 8mm, oo ay ku jiraan fiican aamusan saamayn movie in uu yahay mid aad wax ku ool ah. Qalabka tafatirka Easy in ay isticmaalaan oo ay ka mid yihiin in laguu ogolaado in aad ku darto music, kala oo ay ku biiraan clips iyo xitaa flip video 180 digrii, waxa ku jira xoolo ka mid ah geynta iyo saamaynta raalli yahay in ay ku raaxeystaan.
A yar oo xayiraad ku saabsan xallinta oo aadan ahaan sida cajiib ah sida 8mm marka la eego saamaynta ay final, habase yeeshee waa app dhamaystiran iyo fududahay in la isticmaalo.
8. iSupr8 (Waayo iPhone)
Tani waa version macruufka ah ee app in muuqday in our liiska Android, halkan waxaa isku soo bandhigaysaa, in app iibsiga ku salaysan presets dheeraad ah, iyadoo wax yar ka fiican raadinaya saamayn 8mm in la socda app. Mar kale, waxaa lagu saleyn karaa definta sidoo kale waxaa jira user kale sida diirada configurable fara badan in lagu dari karaa video ama definta gal sida xagashada iyo baro.
Interface A weyn, oo qaar ka mid ah saamaynta fiican, laakin kaliya ee waa in aad aqbasho kharashka dheeraadka ah ee loo baahan yahay in lagu daro saamayn dheeraad ah.
9. Super 8 (Waayo iPhone)
A halkan app tayo dhab ahaantii sare, mar kale, waxa ka mid ah saamaynta badan lagu daro super 8 eegno, laakiin tani mid tagaa tallaabo ama laba sii, isagoo intaa ku daray in awood u leh inay la jaanqaadaan eegmo camera iyo sidoo kale xoq soo xooraan wasakh iyo dhaawaca in la abuuro fantastik ah qaar ka mid ah saamaynta.
Iyada oo doorasho ah lenses ay ka mid yihiin fisheye iyo interface indhuhu u ah taas mid si fudud u farxad ah in la isticmaalo.
App aad u xirfad u eg, waxaana uu dareensan gaar ah si ay u isticmaalaan, iyo qaar ka mid ah soo saarta video eegaya weyn in ay la socdaan.
10. Lens + (Waayo iPhone)
Tani waa app kale ganaax, waxaana suura gal weyn oo Super 8 in lagu saleyn karaa video oo weli labada sawirada, oo ay la socdaan soo xulidda in ka badan 20 kalena, waxa uu siiyaa hab fiican si aad u hesho muuqaal u eg ka Retro waa sidaas oo caan ah ayaa maanta.
In ka yar sida lagu qanci karo sida 8mm ama Super 8 ay saamayn, laakiin si kastaba ha ahaatee waxaana suura gal weyn in la hubaa in ay kor u fursadaha hal abuur aad haddii aad qaadato definta ama video.
Waxa kale oo fiican, app soo jiidasho u iPhone in ay soo saartaa natiijada weyn.
Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada si iPhone oo ay ku jiraan VCF iyo telefoonada
> Resource > iPhone > Top Toban 8mm Video Apps u iPhone iyo Android casriga ah